Abesifazane basiconsela amathe iSilo uMisuzulu - Ilanga News
Home Izindaba Abesifazane basiconsela amathe iSilo uMisuzulu
Abesifazane basiconsela amathe iSilo uMisuzulu
kushayisana imibiko ngokuphepha kwengonyama
ABESIFAZANE abaningi baveze ukuthi balifisa kabi ithuba lokuyogana iSilo uMisuzulu kaZwelithini, esiqokwe ngoLwesihlanu njengoba
singakaganelwa. Lokhu bebekuveza ezinkundleni zokuxhumana.
UHULUMENI waKwaZulu-Natal nomnyango wamaphoyisa kuzwe-lonke baqinisekise ukuqhutshe-kwa kokutshalwa kwamaphoyisa kuzo zonke izigodlo zaseNdlunkulu kaZulu, ikakhulukazi kwesa-KwaKhangelamankengane esihlala iSilo esisanda kumenyezelwa
uMntwana uMisuzulu kaZwelithini.
UMnu Sihle Zikalala onguNduna-nkulu wesifundazwe, uyichithi-le imibiko ethi umbutho wamaphoyisa kulesi si-fundazwe uhoxise amaphoyisa endlunkulu emuva ko-kumenye-zelwa kwesilo esisha ngoLwe-sihlanu ebusuku Kwa-Kha-ngela.
Le mibiko ibisola uhulumeni ngobude-dengu noku-beka impilo yeSilo uMisuzulu engcupheni.
Le mibiko isabalale emuva kokuba uNduna-nkulu kaZulu, iNkosi Mangosuthu Buthelezi ngo-Mgqibelo ebusuku ezwakalise ukuthi kumpha-the kabi ukuthola umbiko kwinhloko yezoku-phepha KwaKhangela, wokuthi umbutho wama-phoyisa sewunikwe umyalelo wokuthi ngeke usakwazi ukuqhubeka nokuqapha iSilo njengoba singakagcotshwa ngokusemthethweni.
Nayizolo ngeSonto kusihlwa uMntwana uBu-thelezi ubesamile esitatimendeni sakhe, ethi akanasizathu sokusenga ezimithiyo ngodaba lo-kuphepha kweSilo uMisuzulu. Uthe usibonile kwabezindaba isitatimende sikaMnu Zikalala, futhi siyabajabulisa ukuthi uthi uhulumeni usa-zibophezele ekuqinisekiseni ezokuphepha kwesilo.
Nokho uthe usalokhu ekuqaphele ukuthi ukhomishana wamaphoyisa esifundazweni aka-kaze asikhiphe isitatimende lapho eziqhelelanisa khona nokuyalelwa kwamaphoyisa ukushiya isigodlo saKwaKhangela.
Isitatimende sikaMnu Zikalala, besithi kakulona iqiniso ukuthi kuke kwaba nezinkulumo zo-kususwa kwezokuphepha esigodlweni. Uthe lo-khu bekuzobeka iSilo uMisuzulu engcupheni ngemuva kokuqokwa njengomholi kaZulu. Uthe ngemuva kokuzwa lezi zinkulumo zisabalala kwabezindaba, uthinte uKhomishana wamapho-yisa esiFundazweni uGeneral Nhlanhla Mkhwa-nazi, wakhuluma noNgqongqoshe wezokuThutha nokuVikelwa koMphakathi uNkk Peggy Nko-nyeni, kanjalo noNgqongqoshe wamaphoyisa kuzwelonke, uMnu Bheki Cele.
“Ngemuva kokukhulumisana nabo, ngifisa ukuphumela obala ngiyichithe imibiko. Kuyi-manje ithimba eliqapha izigodlo likuzona zonke,” kusho uMnu Zikalala.
Uthi kunokuba kuhoxiswe amaphoyisa, bawa-ndisile njengoba bethumele nophiko olusebenza ezimeni ezibucayi. Uthe njengohulumeni bazibophezele ukuqhubeka nokuqinisekisa ukuthi indlunkulu iphephile nabo bonke abahlala ezigodlweni ikakhulukazi iNkosi uMisuzulu.
Kuzokhumbuleka ukuthi ngoMgqibelo ngesi-khathi iSilo esisha sibonakala esigodlweni la-pho bekunomhlangano womndeni khona, besigadwe ngonogada abazimele. Izolo ngeSonto enye yezintatheli ebezisankanise KwaKhangela, iveze ukuthi kunesikhathi lapho ebengasabonwa amaphoyisa kulesi sigodlo kodwa aphinde aqhamuka. Le ntatheli esikhulumile nayo, ithe ishu-the nezithombe ukufakazisa ukuthi kunesikhathi lapho bekushaya khona umoya KwaKhangela, bengekho abezokuphepha.
Previous articleI-mut isabisa ngokumisa izitshudeni eziphehla udweshu
Next articleSilubalubela ukuyodlala e-egypt isilomo se-downs